Nandositra ny mponina rehefa namoaka setroka sy lavenona ilay volokano kely indrindra nifoha any Filipina · Global Voices teny Malagasy
Nandositra ny mponina rehefa namoaka setroka sy lavenona ilay volokano kely indrindra nifoha any Filipina
Voadika ny 22 Janoary 2020 2:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, Français, Ελληνικά, Italiano, English
Sary avy amin'i Ciriaco Santiago III / Manila Today
Nadikan'i Ciriaco Santiago III ny lahatsoratra navoakan'ny Manila Today voalohany, tranokalam-baovao an-tserasera amin'ny fiteny Filipino. Naverina navoaka nahazona alalana ary i Karlo Mongaya no nanao ny fandikan-teniny.
Niseho tamin'ny 12 Janoary 2020 ny fipoahan'ny Volokano Taal marivo rano (mamoaka setroka noho ny rano mafana eo am-bavan'ity volokano ity) tany Filipina . Iray amin'ireo volokano kely indrindra eran-tany mbola velona i Taal, any atsimon'ny renivohitra Manila.
Nahatonga ny lavenona niraraka tany amin'ireo tanàna manodidina izany ary tonga hatrany amin'ny faritra maro tany Atsimon'i Tagalog (atsimon'ny renivohitra Manila), Metro Manila ary Luzon Afovoany (avaratry ny renivohitra Manila) mihitsy aza. Nofoanana avokoa ny sidina rehetra miditra sy mivoaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pinena Ninoy Aquino.
Nofoanana ihany koa ireo fampianarana rehetra amin'ny ambaratonga rehetra sy ny asa ao amin'ny governemanta, afa-tsy ny ‘sampan-draharaha lohalaharana’ (hopitaly, fanampiana vonjy maika, sns) tamin'ny 13 sy 14 Janoary tany Atsimon'i Tagalog, Metro Manila, ary ny faritra sasany tao Luzon Afovoany. Mbola mijanona hatrany ny fampianarana tany Batangas, Cavite, ary Laguna ny andro fahefatra tamin'ny fipoahan'ity volkano ity.
Namoaka fampandrenesana momba ilay fipoahana magmatika (fivoahan'ny magma ao am-bavan'ny) volkano Taal tamin'ny 13 Janoary, ny ampitson'ny fipoahana, ny Ivontoerana misahana ny Volkano sy ny Horohorontany any Filipina (PHIVOLCS) .
Mponina miisa 30.000 mahery no tombanana ho voakasik'izany ary nafindra toerana niala tao Batangas sy Cavite noho ny fipoahan'ny volokano, hoy ny Filankevitra Nasionaly misahana ny Fampihenana sy ny Fitantanana ny Voina. Raha ny filazan'ny Biraom-paritra misahana ny Fampihenana sy ny Fitantanana ny Voina any Batangas dia fantatra fa efa maherin'ny 33.000 ny mponina nafindra toerana tany amin'ny foibe famindrana toerana. Mety tsy tafiditra ao anatin'io isa io anefa ireo olona izay nifindra tamina toerana nosafidiany vonjimaika tamin'ny nahimpony.
Nanameloka ny tsy fisian'ny fampitandremana sy ny fampiomanana ny mponina tao anatin'ireo voina ireo ary maro no nafindra toerana tamin'ny alàlan'ny ezaka nataon'izy ireo taorian'ny hovitrovitra sy ny fivoahan'ny setroka avy amin'ny volokano izay loza mitatao ho azy ireo. Tsy nahavita nitondra avy hatrany ny biby tavela tany amin'ny nosy volokano izy ireo, anisan'izany ny soavaly an-jatony nampiasaina nitaterana mpizahatany ho eny am-bavan'ny volkano ary ny biby hafa noeritreritra fa maty noho ny filatsahan'ny lavenona be loatra.
Sarin'i Ciriaco Santiago III / Manila Today
Nanomboka nifindra toerana ny mponina tao Barangay San Nicolas rehefa nanomboka namoaka setroka nanodidina ny tamin'ny 3 ora tolakandro, 12 Janoary ny volokano Taal.
Niha-natevina ny setroka navoakan'ny volokano Taal tamin'ny Alahady 12 Janoary lasa teo.
Sary avy amin'i Ciriaco Santiago III / Manila Today. Tazana avy ao aorian'ny sarivongan'i Kristy Mpamonjy ao amin'ny saha Marian any Balete, Batangas ny setroka matevina izay nanomboka navoakan'ny volokano Taal.
Ny jono no loharanom-piveloman'ny mponin'ny vondrom-piarahamonina manodidina ny volokano Taal. Tombanana fa misy tawilis miisa 15.033 eo ho eo, karazana trondro efa tandindomin-doza hita ao amin'ny farihy Taal ary voakasiky ny fipoahan'ny volokano.
Ny andro faharoa tamin'ny fipoahana, ny dian-tongotry ny biby ihany sisa no hita tao amin'ny tanàna iray tany Agoncillo, Batangas taorian'ny namindrana toerana ny olona ny alina talohan'izay.
Niverina nitady sy naka ireo biby sy ireo fitaovana fampiasa amin'ny fivelomana sisa tavela ny mponina sasany.
Mampandro ny soavaly Princess Love Bunga i Melvin Ocampo mba hanalany ny loto avy amin'ny fiparitahan'ny lavenona naharitra nandritra ny fipoahan'ny volokano Taal.
Mitohy ny fiainana sy ny asa ho an'ny mponin'i Brgy. (tananakely) Kinalaglagan, Mataas na Kahoy na dia teo aza ny andro faharoa nahitana ny fitohizan'ny fipoahan'ny volkano Taal.
Mbola natevina tamin'ny andro faharoa ny setroka avy amin'ny volokano Taal.